Pa-Oh MP3 » Blog Archive » ထာ,ရက်အာ;ရဲင်,
By Admin-Nan • စုံတွဲခွေများ • 17 Feb 2012	ခွန်ရဲသွေးနဲ့ နန်းမိုးမိုးစံတို့ သီဆိုထားတဲ့ စုံတွဲသီချင်းခွေ တစ်ခွေ ဖြစ်ပါတယ်။ VCD Version ကို မကြာခင်မှာ ခွန်ပအိုဝ်းရဲ့ Youtube Channel မှာတင်ပေးပါမယ်။
khunaungnaing ကျောက်တလုံးမြှို့ March 14, 2012 at 9:34 am	သီချင်းကကောင်းပါတယ်ဗျာ
Reply	Khun Zaw Oo March 20, 2012 at 4:34 am	Dear သူငယ်ချင်းတို့ရေ ခွန်အောင်နိုင်နှင့်နန်းရှယ်ရီဝင်းတို့ စုံတွဲသီဆိုထားတဲ့ အကသီချင်းတစ်ပုဒ် တောင်းဆိုချင်တယ်။ သီချင်းခေါင်းစဉ်တော့ မသိဘူးဗျ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ဆိုတတ်တယ် ( နီမျိုပအိုဝ် မွိုးနဂါသီးပို ဖာဝီဇာ ယို ပိုလီခွို သွီလဲ့ပအိုဝ် သတဲ့ပအိုဝ် မျိုလဲ့ပအိုဝ် ခွိုလဲ့ပအိုဝ် )
Reply	Admin-Khun March 20, 2012 at 2:56 pm	နဲနဲရှည်ရှည်လေး ဆိုပြနိုင်ရင် ဘယ်သီချင်းလည်းဆိုတာ သိမယ်ထင်တယ်။ ရှာကြည့်ပေးပါမယ် သူငယ်ချင်း။ တွေ့တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်..။ Comment အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	ခွန်နဂါးမြတ် April 6, 2012 at 3:20 pm	ချယ်ရီက၀်းတွင် နီသစ္စား န၀် အခွိုက်သွတ် သရား သနဲ
Reply	Admin-Khun April 6, 2012 at 3:33 pm	သြလ,ဒျာ;သွ, – လွဉ်လယ်,ထွားဗာ; နီသွမ်းသီး pa-oh mp3 တဲ့ ဟွိုန်ဟ၀်သ,ရေ,ငါ;သြ .. Reply	နန်းခမ်းပေး June 9, 2012 at 8:11 am	ပေါင်ဖက်သရား သီချင်းကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်…….ခွန်အောင်နိုင်သီချင်းတင်ပေးပါလား နားထောင်ချင်လို့ ပါ…
Reply	Admin-Khun June 9, 2012 at 11:17 am	ခွန်အောင်နိုင်သီချင်းခွေ တော်တော်များများ တင်ထားပြီးပါပြီ အစပိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ အခွေတွေကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အများမှ အများကြီးပါ။
Reply	khunkyawoo June 9, 2012 at 12:07 pm	သီချင်းတွေကကောင်းပါတယ် နောက်ထပ်တင်ပေးဦးနော် နှင်ထွေထွေလိူင်းတိုသီချင်းကောပေါ့
Reply	KhunAungKyawOo July 14, 2012 at 5:46 pm	သီချင်းတွေကကောင်းပါတယ်…ဒါပေမယ့် ထစ်နေတယ်ဗျ…
Reply	ခွန်ညွန့်မောင်ပါ September 9, 2012 at 5:54 pm	thanks very much
Reply	ခွန်မောင် October 10, 2012 at 7:09 pm	ဒီသီချင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနန်းမိုးမိုးစံရဲ့သိချတွေဆိုကျွန်တော်ကြိူက်တယ်သူ့အသံကအရမ်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ် ဒီသိချင်းတွေကျုတင်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	khun khan January 6, 2013 at 8:54 pm	ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။သီချင်းတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်
Reply	khunpaydeet February 6, 2013 at 9:51 am	အရမ်းကောင်းတဲ့သီချင်းတွေတင်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
” တမူထီခါး၊တမားထီနွိုး ” ဆိုတဲ့အခွေကိုတင်ပေးပါအုံးလို့တောင်းဆိုချင်တာပါ
Reply	khun mg July 23, 2013 at 8:58 am	ကေးဇူတင်းငါးနော
Reply	ခွန်မောင်ကယ် (ထီရီး အနောက်ရွာ) July 30, 2013 at 10:34 pm	ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် နော် ။
နောက် ထပ်လဲ သီချင်းကောင်းကောင်း ရှိ၇င်တင်ပေးပါအုးံနော် ။
အမြဲတမ်းပဲ စောင်.မျော်နေမှာ ပါ ..
Reply	နန်းမြတ်နိုးသူ November 15, 2013 at 6:28 pm	အရမ်းနားထောင်လို.ကောင်းပါတယ်
Reply	နန်းမြတ်နိုးသူ November 15, 2013 at 6:29 pm	နောက်ထပ်လည်းတင်ပေးပါအုံးနော်
Reply	khunlayaung November 19, 2013 at 10:02 pm	​​​​ကျေဇူးပဲအကိုကျွန်​​နော်​သမှသွားတယ်​
Reply	ခွန်ဂျစ်တူး ပေါမူအုပ်စု ပင်လုံရွာ December 31, 2013 at 3:18 pm	သီချင်းတွေနားထောင်ရတာအရမ်းကောင်းပါတယ် နားထောင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ဒေသကိုတောင်ပြန်ချင်တယ်ဗျာ
ဒါပေမယ့်နားထောင်ရတာထစ်နေတယ် အဲဒါလေးကိုတော့ နည်းနည်းလေးလုပ်ပေးပါအုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပအိုဝ်းညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပါစေ
Reply	အောင်လ March 5, 2014 at 10:04 pm	ပအို(ဝ်)သီချင်းတွေအားလုံးကြိုက်တယ်……များများတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်………။
Reply	ပတိမ်ရွာသားလေး May 30, 2014 at 12:48 pm	ပြည်ထောင်စုထဲက ပအိုဝ်း လှိုင်လေးပြန်ဖွင့်ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာ ပအိုဝ်းသီချင်းတွေးကို နာထောင်းရတာ အရမ်စိတ်ကြည်နူးရပါ ။ ကျေးဇူးအများတင်းပါတယ်………
Reply	ခွန်ထွန်းထွန်းဦး June 13, 2014 at 8:55 pm	ဒေါင်းမရလို့ ပါဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးတစ်ချက်လောက်ကြည့် ပေးပါလား
၂၄ နာရီအတွင်း: 625
Online ရှိသူပေါင်း: 3